Andranobevava - Nanisana Raikitra ny fanadiovana faobe
Mitohy hatrany ny asa fanadiovana tanterahin’ny boriborintany fahadimy, Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Ny tatatra eny Andranobevava miainga eo amin’ny sekoly Le Petit Nid ka hatreny Nanisana no nanombohana ny asa ny 28 mey lasa teo. Niara-nisalahy nanatanteraka ny asa ireo ekipa teknika sy ireo “agent d’assainissement”. Hifarana ny 11 jona ho avy izao ny asa raha ny fantatra. Tanjona ny hanalana ireo tsikafona sy fako manakana ny fikorianan’ny rano anaty tatatra sady hisorohana ny fiakaran’ny rano. Narahina fanentanana ny mponina tsy hanary fako any anatin’ireny lakandrano ireny ny hetsika.